jadwal la saadaalin karo
Jadwalka la saadaalin karo waxay ku lug leedahay hubinta in shaqaaluhu ay leeyihiin xoogaa xakameyn ah saacadaha shaqada ee loo qorsheeyay, in aan la bedelin jadwalka shaqada iyada oo aan la helin ogolaanshaha shaqaalaha, iyo/ama siinta shaqaalaha digniin sare oo ku saabsan isbedelada jadwalkooda shaqo.
Waxay u ogolaataa shaqaalaha inay qorsheeyaan daryeelka ilmaha, gaadiidka, iyo miisaaniyada
Waxay u horseedaa natiijooyin wanaagsan oo korriinka ilmaha sababtoo ah xasillooni dheeraad ah oo loogu talagalay qabanqaabada daryeelka ilmaha, taas oo wanaajisa garashada iyo natiijooyinka dabeecadda iyo horumarka luqadda
Waxay hoos u dhigtaa walaaca waalidiinta waxayna wanaajisaa dabeecadaha caafimaadka qaba
Tas-hiilaadka wax-soo-saarka oo raadinaya dabacsanaan ku jira jadwalka si loo daboolo baahida shaqada
Taariikh ahaan, baahida loo qabo alaabooyinkooda, dhirta wax-soo-saarka ee Cargill waxay shaqeysay lix maalmood usbuucii, taasoo u baahan shaqaalaha wax soo saarka inay si joogto ah u shaqeeyaan fasaxyada iyo maalmaha fasaxa ah. Si kastaba ha noqotee, marka la eego cadaadiska shaqada iyo baahida kordhaysa ee dabacsanaanta, shirkadu waxay u wareegtay jadwal shan maalmood / usbuuc ah oo la saadaalin karo dhammaan xarumaha wax soo saarka. Maanta, shaqaaluhu waxay dooran karaan inay shaqeeyaan saacadaha dheeraadka ah maalmaha fasaxa ah.
Jadwalka dabacsan ayaa muddo dheer diyaar u ahaa shaqaalaha Cargill ee aan wax soo saarka lahayn (eeg daraasadda kiiska). Laakin debecsanaanta jadwalku waa fikrad cusub oo ka jirta xarumaha wax soo saarka ee shirkadda, waxayna bilaabaysaa in la qabto, sida ay sheegtay Alisa Brown, Habka Shaqaalaysiinta Wax soo saarka ee xarunta Cargill ee Wichita, Kansas. Waxay sheegtay in shirkadu ay horumarinayso istaraatiijiyad shaqo oo shirkadeed oo leh shirkad la-talin hormuud ah oo leh 12 shaqo oo kala duwan, laga bilaabo xannaanada carruurta ilaa jadwalka, loogu talagalay shaqadeeda wax soo saarka.
Tusaale ahaan, Cargill waxa ay tixgalinaysaa abka u oggolaanaya shaqaalaha inay doortaan hawlahooda shaqo oo ay ku beddelaan asxaabtooda. Inta ay curdinka tahay, habkan oo kale waxa uu awood siin doonaa shaqaalaha in ay xakameeyaan jadwalkooda si ay u daboolaan baahiyahooda shaqsi iyo mid qoysba.
Waxay sidoo kale raadinayaan inay hirgeliyaan ikhtiyaarrada waqti-dhiman ee tas-hiilaadka wax soo saarka waxayna tijaabinayaan fikradda dhowr warshadood. Hal duuliye, 25% shaqaalaha wax-soo-saarku waa wakhti dhiman.
"Waxaan meel walba ku haynaa boosas banaan, marka waxaan rabnaa inaan hawlgelino siyaabaha aan ku buuxinayno daldaloolada oo aan u yareyno culeyska shaqada ee hadda jira," Brown ayaa yiri. "Waxaa jira tiro shaqaale ah oo suurtagal ah oo aan awoodin - ama aan rabin - inay si buuxda u shaqeeyaan, waxaanan u baahanahay inaan si wanagsan uga qayb-gelinno, maadaama ay wax ku biirin karaan ururkayaga."
Sida laga soo xigtay Brown, shirkadaha hal-abuurka leh iyo kuwa dabacsan ayaa ku guuleysan doona suuqa shaqada.
"Debacsanaantu maaha wax la yaab leh," Brown ayaa yidhi. "Waa muhiim in la soo jiito kartida hadda iyo in la abuuro shaqaale kala duwan oo loo dhan yahay, taas oo muhiim u ah soo jeedinta qiimaha Cargill. Iyada oo qayb ka ah riixitaankayaga xagga sinnaanta, waxaanu bilownay in aanu siino macaashka shaqaalaha wakhti-dhiman si aanay shaqaalaheenu u dhimin dheeftooda si ay u sii wadaan jadwal shaqo oo daboolaya baahiyaha qoyskooda.
Goobta: Wayzata , MN
Sharciyada jadwalka saadaalinta: Waxa ay daboolayaan iyo sida loo hoggaansamo | Workforce.com
Xarunta Iskaashatada Saamaynta Aadanaha ee Dimuqraadiyadda caanka ah. "Jadwalka Jadwalka Caafimaadkayaga: Sida Saacadaha Shaqada ee Aan La Saadalin karin ay u Saameeyaan Caafimaadka iyo Ladnaanta." Luulyo 2016
Xarunta Sharciga Haweenka Qaranka. "Jadwalka cadaalada ah ayaa muhiim u ah waalidiinta shaqeeya iyo wanaagga caruurtooda." Sebtembar 2017
Ben-Ishay, Liz; Jodie Levin-Epstein, iyo Hannah Matthews. "Xasilinta Xasiloonida: Caqabadaha Jadwalka Shaqada Volatility iyo Daryeelka Carruurta." KALA DUWAN Maarso 2014